पुष्प व्यवसायी मर्कामा ! काटेर फाल्नुको विकल्प छैन «
पुष्प व्यवसायी मर्कामा ! काटेर फाल्नुको विकल्प छैन
प्रकाशित मिति : 14 April, 2020 2:53 pm
आफ्नो ग्रिन हाउसमा ढकमक्क फूल फुलेपनि धुलिखेल नगरपालिका ५ श्रीखण्डपुरस्थित होरिजन नर्सरीका सञ्चालक वीरेन्द्र श्रेष्ठले हरेर दिन बिताउनुपरेको छ ।
“मेरो नर्सरीमा अहिले गुलाफ, जिप्सी, कार्नेशन, लिमोनियम (स्टाटिस) फूल ढकमक्क फुलिरहेको छ तर बेच्न नपाउँदा कुनैको कोपिला नै चुँडेर फाल्ने र कुनै काटेर चोकमा लगेर बाँड्ने गरेको छु ।” उहाँले भन्नुभयो, “चैत २०÷२२ देखि वैशाख जेठसम्म फूल बेच्ने समय हो, तर बिक्री गर्ने अवस्था नै नभएपछि काटेर फाल्नुको विकल्प छैन ।”
उहाँलाई यसका कारण करिब २० लाख रुपैयाँ घाटा पर्ने देखिएको छ । एकातिर आम्दानी खेरा जानु, अर्कोतिर भाडा तिर्नुपर्ने समस्या र कामदारलाई तलब कसरी ख्वाउने भन्नेमा चिन्तामा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । “फुलेको फूलहरु सबै काटेर दुई÷तीन पटक चोकमा लगेर राखिसकेँ, बाटोमा हिँड्नेहरुले लान त पाउँछ भनेर चौतारामा राख्ने गरेको छु ।”
बनेपा नगरपालिका १० जनागालका अर्का पुष्प व्यावसायी भोजराज तिमल्सिनाले यस वर्ष आफूहरु ठूलो मारमा परेको बताउनुभयो । फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल काभ्रेपलाञ्चोकका पूर्वअध्यक्ष एवं युनिक फ्लोरा फर्मका सञ्चालक तिमल्सिनले फुलिरहेको फूल फाल्नुबाहेक अरु विकल्प नभएको बताउनुभयो । “फूल फुल्न थालेपछि धैर्य गर्न पनि नहुने, दिन बिराएर बजारीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै फाल्नका कामदार लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “भ्रमण वर्ष र नयाँ वर्षलाई केन्द्रित गरेर उत्पादन गरेको फूलखेती लकडाउनका कारण ठूलो घाटामा गयो ।” उहाँले विषेश गरी कार्नेशन, जर्वेरा, लिमोनियम र गुलाफको खेती गर्नुभएको छ ।
बनेपा नगरपालिका १० जनागालका अर्का मोर्डन नर्सरी व्यावसायी ध्रुव दाहालले यही मौसममा विशेषगरी चल्ने फूलको विरुवा बेचेर आम्दानी गर्ने उहाँले यसवर्ष धेरै घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । “विशेष गरी होटलहरुमा विरुवा लाने समय हो, तर नर्सरीबाट विरुवा नै बेच्न नपाएका कारण ठूलो मार खेप्नु परेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “महिनाको करिब एक लाखको दरले घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ ।” दाहालले भन्नुभयो ।
एसोसिएशनका काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष एवं होरिजन नर्सरीका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा ३० जनाभन्दा बढी किसानहरुले फूल खेती गर्दै आइरहनुभएको छ । व्यवसायिकरुपमा नै खेती गर्दै आउनुभएका किसानले करिब रु १५ करोडसम्मको लगानी गरी खेती गरिरहेको बेला लकडाउनले समस्यामा पारेको बताउनुभयो । एसोसिएशनका काभ्रेपलाञ्चोकका उपाध्यक्ष भेषराज दनुवारका अनुसार यसवर्ष अन्दाजी रु तीन करोड भन्दा बढीको घाटामा पर्ने खतरा देखिएको छ । रासस